Sonto 14 Mashi 2021
Iwebhusayithi I-Tailor Made Fragrance yazalwa kokuhlangenwe nakho kwenkampani yase-Italy ekhethekile ekuthuthukiseni nasekukhiqizweni kokufakwa okuyisisekelo kwamakha, ukunakekelwa kwesikhumba, imikhakha yezimonyo yezemibala neyasekhaya. Indima yeWebgriffe bekuwukusekela isu lebhizinisi lamakhasimende ngokwakha isisombululo esithanda ukuqwashisa ngeBrand kanye nokwethulwa kweYunithi lebhizinisi elisha kugxile kakhulu ekuyekeni abasebenzisi ukuba benze amakha abo ahlukile futhi abekiselwe umkhuba ngokugcwele, igxathu lesinyathelo senqubo ebanzi yokukhula kwezimboni kanye ingxenye esetshenziswayo ye-B2B.
Ukulawulwa Kwekhwalithi Yomoya
Mgqibelo 13 Mashi 2021
Ukulawulwa Kwekhwalithi Yomoya I-Midea Sensia AQC iyi-hybrid ehlakaniphile ehlanganisa ingaphakathi lasekhaya nobabili nesitayela. Iletha ubuchwepheshe obenziwe ngabantu kanye nokwenza izinto okusha ngokusebenzisa izici, ukulawula izinga lokushisa nokuhlanzwa kwekhwalithi yomoya ngokukhanyisa kanye ne-vase yokuhlobisa igumbi. Ukuqhubeka kahle kufinyelela kubuchwepheshe bezinzwa obukwazi ukufunda imvelo nokugcina indawo yokuhlala kanye nokushisa komswakama kuzinzile, ngokusho kokusethwa kwangaphambilini, okwenziwe yi-MideaApp.
Ukuzimela Kwe-Robot Mobile
Lwesihlanu 12 Mashi 2021
Ukuzimela Kwe-Robot Mobile Irobhothi lokuzulazula lokuzenzakalelayo lezinto ezibhedlela. Luhlelo olusebenza ngomkhiqizo ukwenza ukulethwa okuphephile okuphephile, kunciphisa amathuba ochwepheshe wezempilo wokuvezwa ukugula, ukuvimbela izifo zobhubhane phakathi kwabasebenzi basesibhedlela kanye neziguli (COVID-19 noma H1N1). Umklamo usiza ukuphatha ukulethwa esibhedlela ngokufinyeleleka kalula nokuphepha, usebenzisa ukuxhumana okulula kwabasebenzisi ngobuchwepheshe obunobungane. Amayunithi ama-robotic anekhono lokuhamba ngokuzimela endaweni yangaphakathi futhi avumelanise ukugeleza okuhambisana namayunithi afanayo, ekwazi ukwenza umsebenzi wokubambisana weqembu.
Lwesine 11 Mashi 2021
Indawo Indlu yakwaShkrub yavela ngaphandle kothando nangenxa yothando - izithandani ezinothando ezinezingane ezintathu. I-DNA yendlu ifaka imigomo yobuhle ehlelayo ethola ugqozi emlandweni namasiko ase-Ukraine aphefumulelwe ukuhlakanipha kwaseJapan. Ingxenye yomhlaba njengezinto ezibonakalayo izenza izwakale ezingxenyeni ezihlelekile zekhaya, njengophahla lwangempela oludwetshwe odongeni nasezindongeni zobumba ezihle nezinobumba. Umqondo wokuhlonipha udumo, njengendawo eyisisekelo, ungazwakala kulo lonke ikhaya, njengentambo eqondayo ethambile.
Lwesithathu 10 Mashi 2021
Lwesibili 9 Mashi 2021
I-Air Conditioner I-Midea Sensia inyusa ikhwalithi yempilo nendlela entsha yokuveza into yomhlobiso. Ngaphandle kokugeleza komoya nokuthula, kuveza iphaneli yokuthinta enikeza ukufinyelela kwemisebenzi nemibala yombani namandla. Ukwelashwa kombala okusiza inqubo yokulwa nokuxineka, imikhiqizo eyenziwe ngezinto zombili lezi zindlela zombili, inhle futhi inobuhle. Ngaphezu kobuhle obuhlukile, ukwakheka kwawo kuhlanganisa ingaphakathi lekhaya nobabili nesitayela, ukwazisa indlu ngokukhanya okungaqondile.
Iwebhusayithi Ukulawulwa Kwekhwalithi Yomoya Ukuzimela Kwe-Robot Mobile Indawo I-Smart Aroma Diffusor I-Air Conditioner